“किरण बधाई छ” तिमीलाई जय नेपाल
December 8, 2019 11:37 pm
भिम क्षेत्री । आज भन्दा करिब एक बर्ष अघि जन्म गाउँ पर्बत जिल्ला को राम्जा देउरालीमा म पढेको स्कुल श्री पशुपति उच्च मा.बिको “स्वर्ण जयन्ती” को अबसरमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा म पनि मेरो जन्मस्थान गएको थिए । बेलुका स्कुल परिसर घुम्दै थिए सायद मेरो पनि बर्षाै पछिको अवलोकन थियो त्यो । साँझ पर्न लागिसकेकाे थियो । मेरो अगाडि एकजना चिनेजानेकाे जस्तै लाग्ने व्यक्ती “जयनेपाल सर” भन्दै उभियो । यसो हेरे अनि अनि भने, जय नेपाल भाइ … आश्चर्यभावमा साेधेँ । को किरण ???
हजुर सर म किरण, किरण बोगटी, हजुर को चेला चिन्नु भएन? अचम्मित हुँदै मैले जवाफ दिएँ, किन नचिन्नु भाइ, के छ? आज कता अचानक किरण ? सर म भोलि को म्याराथन प्रतियाेगिता को लागि आएको उनले भने । पहिले बक्सिङकाे खेलाडी किरण म्याराथन प्रतियाेगितामा आएकाेले साेधेँ, तिमी त “बक्सिङ” को खेलाडी होइन र? उनले बक्सिङ छाेडेर अहिले “म्याराथुन”को लागि तयार गरेकाे सुनाए। मैले उनकाे पर्वतमा रहँदा उनकाे बसाइका बारेमा साेधखाेज गरेँ । पाँच जनाकाे टाेली बस्ने टुँगाे नभएकाे तथा पाेखरा बाहिनीले , चण्डीका गणमा जान भनेकाे तर चण्डीका गण जाँदा आफ्नो ब्याबस्था आफै गर भन्ने जवाफ आएपछि बासकाे व्यवस्था गर्ने हिँडेकाे बताए ।
मनमनै भने, कस्तो अचम्म ! सँगठनको एउटा कर्मठ सिपाही त्यस माथी खेलाडी ? कस्तो ला’परबाही होला? कमसेकम! एउटा राम्रो “कमाण्डर” भनेको “आमा बाबू” बराबर हुन्छ। कस्तो ला’परबाही ?
अनि फेरि सोधे , किरण खाना खाने केही दिनु भयो? सर केही छैन आफ्नै खर्च मा आएको हामी त । म त अवाक् भएँ ! मेरो जन्म ठाउँमा हिजोको मेरो चेला र मेरो सङ्गठन को परिवार , पाँच जनालाई त म आफ्नै घर नभएपनी मेरो सानिमाको मा लगेर एक छाक खुवाउन सक्छु भनेर आफुसँग जान भने । बिस्तारै साँझ पर्दै थियेा । भोली यसरी दौडने , यो ठाउँमा यस्तो बाटो छ। यस्तो सम्स्या आउन सक्छ । बाटो बारे जानकारी दिँदै भने भोलि जसरी पनि जित्नु पर्छ है। उनी हाँसे । आदेश माने जस्तैगरि मुन्टाे हल्लाए ।
जन्मले पर्वत भए पनि मेरो बसाइ त पोखरा । म पनि यहाँ पाहुना हुन आएकाे । मेरो सानिमाकाे घर बसेको थिएँ । गाउँको सानो घर मेरो लागि छुट्याइएको त्यो सानो कोठा । सोँचे, मेरो सिपाहीले राम्रो सुत्न पायाे भने पाे भोलिको दौड जित्न सक्ला । अनि ती ५ जनालाइ मेरो सुत्ने ठाउँ देखाउदै तिमी हरु यहाँ सुत भने । सानिमा लाई भने यी हजुर का अरु छोरा पनि आएका छन है भोली दौडका लागि । अतिथी देवाे: भवकाे सँस्कार सिकाउने सानिमा पनि के कम उहाँले सबैलाइ खुला मनले स्वागत गर्नुभयाे । ए बाबू हर ल ल आउ आउ । साझ झमक्क भइसकेकाे थियाे । सानीमा चुल्हाे तिर जाँदै बहिनी लाई बोलाउनु भयो । अरु खाना थप गर है ५ जना बाबू हरु पनि आएका रहेछन। किरण लगायत अरु सिपाही लाई भित्र बस्न भने । कपडा फेरफार गरि हात मुख धाेए । त्यत्तिकैमा सानिमाले ६ ओटा गिलास भरी तातो दूध ल्याइ सक्नु भएछ। ल बाबूहरु खाउ । दुध खाइवरी मैले भने भाइ भोली दौड यहाँ गाउँमा , खसी को मा’सु तत्काल पाइदैन । बरु कुखुरा को मा’सु ल्याएको छु । खाउ है ।
किरण ले भन्यो सर धन्यवाद छ तर माफ गर्नुहाेला । भोली दौड छ । आज हामी माछा मा’सु खादैनाै । भोली दौडन असजिलाे हुन्छ । ल त्यसो भए यो बाबू हरु कसरी त्यत्रो पन्चासे को टुप्पोमा पुगेर आउछन है । भित्र बाट सानिमाले चि’न्ता जाहेर गर्नुभयो। गफ गर्दागर्दै खाना खाने बेला भयाे । बहिनी हरुले खाना तयार पारे । त्यो पनि दाल भन्दा धेरै घिउ राखेर । बिहान हाफ म्याराथुन सुरु भयो मैले किरण सहित ५ जनालाइ शुभकामना सहित अगाडी बढाए । मेरो मुटुको धड्कन तेज भयाे । के हुन्छन मेरो सिपाही भनेर? उनीहरु दाैडदै थिए । मेरा आखा उनीहरु सँगै पर पर पुग्दै थिए । मेरो दुई जना सिपाही पहिलो र दोस्रो भए । सायद त्यो मेरो जीवन को आफ्नै जित जस्तै थियो।आज त्यही सिपाही १३ अाैँ दक्षिण एशियाली खेलकुद सागमा स्वर्ण पदकसहित देश को शिर उच्च राख्न सफल भएँ सर हजुर को आशीर्वाद भनेर फोन गर्छ। मेराे छाती गर्वले चाैडा हुन्छ । उस्ले एक बर्ष अघि त्यो जितले झारेको मेरो आँसु । आज देशलाई नै खुशी दिन सफल भएको छ।
किरण भन्छ:- सर म सुदुर पश्चिमकाे सानो परिवारमा जन्मेको मान्छे। हजुरले नै २०६४/६५ सालमा म सिपाही भएर पोखरा “कालिका गण” मा हुदा, हजुर सुबेदार मेजर को नाता ले… मलाइ खेल्न हाैसला दिनुभएकाे । अघिल्लो बर्ष हजुर सुत्ने बिस्तारा हामीलाइ छाडेर हजुर अरुको घरमा सुत्न गएको। त्यही भएर आज हजुर लाई यो खुशी साट्न र सुनाउन फोन गरेको सर । जय नेपाल। अनि पर्वतमा रहँदा माया गर्नुहुने आमाको फोन नम्बर दिनुस न ! म फोन गर्छु। जसले हामीलाइ आफ्नो माया ममता र न्यानाे अातिथ्य सत्कार मात्रै दिनुभएन जसरी पनि जित्नु पर्छ है भनेर आशीर्वाद पनि दिनु भयाे । म उहाँ लाई पनि फोन गर्छु र आशीर्वाद माग्छु। यति भन्दाभन्दै फेरि पनी मेराे आँखामा आँसु टिल्पिलाइसकेछ । अनि खुसी हुँदै भने, किरण धन्यवाद तिमिलाइ । आज तिमीले देशकाे नाम राखेका छाै । एउटा इट्टा थपेको छौ। आज तिमी लाई जय नेपाल छ मेरो।
(लेखक भिम क्षेत्री सशस्त्र प्रहरी बल नेपालकाे प्रहरी निरिक्षक पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँले १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को म्याराथनमा स्वर्ण पदक विजेता खेलाडी किरणसिंह बोगटीका लागि व्यक्त गरेकाे शब्दहरु उहाँकाे फेसबुकबाट साभार )